Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Farmashiyaha - Shiinaha Warshad Soo Saarta Daawooyinka
Povidone waa homopolymer oo ah 1-vinyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), oo si xor ah loogu milmi karo biyaha, ethanol (96%), methanol, iyo dareeraha kale ee dabiiciga ah, si toos ah ugu milmaya acetone. budo cad ama jajab, oo u dhexeeya hoos udhaca viscosity-ka sare & hoos udhaca ilaa miisaanka molikal sare, oo lagu garto K Value, oo leh astaamo aad ufiican, filim sameynta, koollo, xasiloonida kiimikada iyo astaamaha aaminka sunta. Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah ...
Copovidone oo leh 60/40 raashin N-Vinylpyrrolidone ah oo loogu talagalay Vinyl Acetate, oo lagu milmi karo inta badan dareeraha orgaaniga ah. Kaas oo ku jira budada, Copovidone wuxuu sameeyaa filim adag, biyo-dhaqaajin kara iyo dhalaalaya, wuxuu leeyahay iswaafajin aad u fiican oo leh bacyaal badan iyo wax ka beddelayaal. Kala-miiridda wanaagsan ee biyaha, aalkolada iyo dareeraha kale ee dabiiciga ah. Halbeegyada Farsamada ee Muhiimka ah: Muuqaalka budada cad ama huruud-cad ama jajab, Hygroscopic Viscosity (Muuji sida Qiimaha K) 25,20 ~ 30,24 Solubility Si xad dhaaf ah loogu dhex milmi karo biyaha, qamriga ...
Crospovidone waa PVP iskutallaabaysan, PVP oo aan lakala furfuri karin, waa hygroscopic, laguma milmi karo biyaha iyo dhammaan waxyaabaha kale ee dareeraha la wadaago, laakiin wuxuu si dhaqso leh ugu biiraa xallinta biyaha iyadoo aan la helin wax jel ah .Its; loo kala qaadey sida Crospovidone Nooca A iyo Nooca B iyada oo loo eegayo cabirka walxaha kala duwan. Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah: Nooca Crospovidone Nooca Nooca C Crospovidone Nooca B Muuqaalka Caddaanka ama budada huruud-cad ama jajabyada Aqoonsiga A. Nuugista Cudurka B. Ma jiro midab buluug ah oo soo baxa. CA Hakinta waxaa loogu ...